Applying forawork permit in the Netherlands - Law & More B.V.
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း။ ဤသည်ကိုသင်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတစ် ဦး အနေဖြင့်သိရှိထားရန်လိုအပ်သည်။
၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ အထိဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအားလုံးတည်ရှိပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံသားဖြစ်သည့်ဒတ်ခ်ျကုမ္ပဏီများတွင်နေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိဘဲအလွယ်တကူစတင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသည်ဥရောပသမဂ္ဂမှထွက်ခွာလာသောအခါအခြေအနေပြောင်းလဲသွားသည်။ သင်သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အပြီးနယ်သာလန်တွင်အလုပ်လုပ်လိုပါသလား။ ထိုအခါသင်သတိရသင့်သည့်အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများစွာရှိသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အီးယူ၏စည်းမျဉ်းများသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိတော့ပါ။ သင်၏အခွင့်အရေးများကိုဥရောပသမဂ္ဂနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသဘောတူထားသည့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်သဘောတူညီမှုအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏စည်းမျဉ်းများကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
စကားမစပ်၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တွင်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိအလုပ်လုပ်နေသောဗြိတိန်နိုင်ငံသားများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီချက်အနည်းငယ်သာပါ ၀ င်သည်။ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍ ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပရှိနိုင်ငံသားများအတွက်နိုင်ငံတော်စည်းမျဉ်းများ (အီးယူ / အီးယူနိုင်ငံသားမဟုတ်သူ၊ နယ်သာလန်တွင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုသည်။ ဤအခြေအနေတွင်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်အကိုင်အက်ဥပဒေ (WAV) ကအီးယူပြင်ပမှနိုင်ငံသားသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်လိုအပ်သည်ဟုပြဌာန်းထားသည်။ သင်နယ်သာလန်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည့်ကာလပေါ် မူတည်၍ လျှောက်ထားနိုင်သောအလုပ်အမျိုးအစားနှစ်ခုရှိသည်။
အလုပ်လုပ်ခွင့် (TWV) UWV မှ၊ သင်သည်နယ်သာလန်တွင်ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်မနည်းနေလိုလျှင်။
စုပေါင်းနေထိုင်ခွင့်နှင့်အလုပ်ပါမစ် (GVVA) IND ကနေ၊ သင်နယ်သာလန်မှာရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်ကြာနေမယ်ဆိုရင်။
အလုပ်ပါမစ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးလုံးအတွက်သင် UWV သို့မဟုတ် IND သို့လျှောက်လွှာ တင်၍ မရပါ။ အထက်ဖော်ပြပါအာဏာပိုင်များမှအလုပ်ရှင်သည်သင်၏အလုပ်ရှင်မှလျှောက်ထားရမည်။ သို့သော်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ဗြိတိသျှနှင့်သင်အီးယူပြင်ပမှနိုင်ငံသားအဖြစ်ထမ်းဆောင်လိုသောရာထူးအတွက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်မပေးမီအရေးကြီးသောအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီရမည်။
TWV သို့မဟုတ် GVVA အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပါမစ်အတွက်အရေးကြီးသောအခြေအနေတစ်ခုမှာဒတ်ခ်ျနှင့်ဥရောပအလုပ်သမားစျေးကွက်တွင်“ ဦး စားပေးကမ်းလှမ်းမှု” မရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏အလုပ်ရှင်သည်နယ်သာလန်နှင့် EEA မှ ၀ န်ထမ်းများကို ဦး စွာရှာပြီး UWV ကိုအလုပ်ရှင် ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသို့အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုတင်ခြင်းအားဖြင့် UWV သို့အသိပေးရမည်။ သင့်ရဲ့ဒတ်ခ်ျအလုပ်ရှင်သည်သူ၏ပြင်းထန်သောစုဆောင်းမှုအားထုတ်မှုများသည်ရလဒ်များကိုမပြနိုင်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်မှသာဒတ်ခ်ျ (သို့) EEA ၀ န်ထမ်းများသင့်တော်သော (သို့) ရရှိနိုင်မှုမရှိသဖြင့်ဤအလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်ခန့်နိုင်သည်။ စကားမစပ်ပြောရလျှင်အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တစ်ခုအတွင်းရှိ ၀ န်ထမ်းများလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ပညာရေး ၀ န်ထမ်းများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ guest ည့်ကထိကများ၊ နောက်ဆုံးတွင်အီးယူပြင်ပမှ (ဗြိတိသျှ) နိုင်ငံသားများသည်ဒတ်ခ်ျအလုပ်သမားဈေးကွက်သို့အမြဲတမ်း ၀ င်ရောက်ရန်မျှော်လင့်မထားကြပါ။
အီးယူအပြင်ဘက်မှဝန်ထမ်းတစ် ဦး အတွက်တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်
TWV သို့မဟုတ် GVVA အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုချက်အပေါ်ချမှတ်ထားသည့်အခြားအရေးကြီးသောအခြေအနေတစ်ခုမှာသင်သည်ဗြိတိသျှနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပတွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသင်နယ်သာလန်တွင်သင်အလုပ်လုပ်နိုင်သောတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် (သို့မဟုတ်ရရှိမည်) ဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ မည်သည့်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ကိုသင်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်သင်အလုပ်လုပ်ချင်သောကြာချိန်ကို အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်တိုပါကခေတ္တတည်းခိုသောဗီဇာလုံလောက်လိမ့်မည်။ သင်သည်ဤဗီဇာအတွက်သင်နေထိုင်သောတိုင်းပြည်ရှိဒတ်ခ်ျသံရုံးသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေထိုင်သောနိုင်ငံ၌လျှောက်ထားနိုင်သည်။
သို့သော်လည်း၊ သင်သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်အလုပ်လုပ်လိုပါကနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်သည်သင်နယ်သာလန်တွင်လုပ်ဆောင်လိုသောအလုပ်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကုမ္ပဏီအတွင်းလွှဲပြောင်းပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ပြီးသင်အားသင်တန်းသား၊ မန်နေဂျာသို့မဟုတ်အထူးကုအဖြစ်ဒတ်ခ်ျဌာနခွဲသို့ပြောင်းရွှေ့ပါကသင်၏ဒတ်ခ်ျအလုပ်ရှင်သည် GVVA အောက်ရှိ IND ၌နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောနေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုရန်သင်သည်အီးယူပြင်ပတွင်တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီနှင့်ခိုင်လုံသောအလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းစာချုပ်ပါ ၀ င်သည့်အထောက်အထားအထောက်အထားနှင့်နောက်ခံအထောက်အထားကဲ့သို့သောအထွေထွေအခြေအနေများအပြင်အခြေအနေများစွာနှင့်လည်းတွေ့ဆုံရမည်ဖြစ်သည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းအချင်းချင်းလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောနေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကဆက်သွယ်ပါ Law & More.
ကျွမ်းကျင်သောရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား။ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးတွင်သို့မဟုတ်အထူးကုအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပရှိနိုင်ငံများမှအဆင့်မြင့်အရည်အချင်းပြည့် ၀ သော ၀ န်ထမ်းများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသောရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားခွင့်ပြုချက်ကိုလျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဤလျှောက်လွှာကို GVVA ၏မူဘောင်အတွင်းမှအလုပ်ရှင်မှ IND သို့တင်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤနေထိုင်ခွင့်သည်သင်ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်မူကား၊ ၎င်းကိုမပေးမီအခြေအနေများစွာနှင့်တွေ့ဆုံရပေမည်။ ဤအခြေအနေများနှင့်သူတို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာတွင်တွေ့နိုင်သည် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအသိပညာ။ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ ညွှန်ကြားချက် (EU) 2016/801 ၏အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းသိပ္ပံနည်းကျသုတေသီများအတွက်ကွဲပြားသော (အပို) အခြေအနေများရှိသည်။ သင်ဟာလမ်းညွှန်ချက်အရနယ်သာလန်မှာအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ဗြိတိသျှသုတေသီလား။ ထို့နောက်ဆက်သွယ်ပါ Law & More။ လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဥပဒေမှကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကုများကသင့်ကိုဝမ်းမြောက်စွာကူညီပေးပါသည်။
ဥရောပအပြာရောင်ကဒ်။ ဥရောပအပြာရောင်ကဒ်သည်ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားများကဲ့သို့ပင်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်မရှိကြသူများ၏အဆင့်မြင့်ပညာတတ်သောရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအတွက်နေထိုင်ခွင့်နှင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်ဖြစ်ပြီး၊ မှတ်ပုံတင်ထားသော ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မှ စ၍ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လည်းမရှိပါ။ GVVA ၏မူဘောင်အတွင်းအလုပ်ရှင်မှ IND ကိုလျှောက်ထားရမည်။ ဥရောပအပြာရောင်ကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ၁၈ လကြာအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်၎င်းအသင်းဝင်နိုင်ငံ၏အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီပါကသင်သည်အခြားအသင်းဝင်နိုင်ငံတွင်စတင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်မည်သည့်အခြေအနေများရှိသည်ကိုလည်းသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအသိပညာ.
Paid အလုပ်အကိုင်။ အထက်ဖော်ပြပါရွေးချယ်စရာများအပြင်လခပေးသောအလုပ်အတွက်နေထိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည့်အခြားခွင့်ပြုချက်များစွာရှိပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ဥပမာသင်သည်အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဒတ်ခ်ျနေရာတစ်ခုတွင်ဗြိတိသျှ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အနေနှင့်သို့မဟုတ်ဒတ်ခ်ျလူသိရှင်ကြားထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဗြိတိသျှသတင်းထောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စတွင်သင်၏နေထိုင်မှုခွင့်ပြုချက်အရအခြားနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ကိုသင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီးအခြား (ထပ်ဆောင်း) အခြေအနေများကိုသင်လိုက်နာရမည်။ သင်လိုအပ်သောနေထိုင်ခွင့်သည်သင်၏အခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်သည်။ At Law & More ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုသင်နှင့်အတူတူဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းကို အခြေခံ၍ သင်မည်သည့်အခြေအနေနှင့်တွေ့ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သင်သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် TWV သို့မဟုတ် GVAA အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပါမစ်လိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အထူးခြွင်းချက်ကိစ္စများတွင်တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုတင်ပြရန်လိုအပ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံ UWV သို့တင်ပြရန်လိုအပ်သည်။ များသောအားဖြင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မည့်အလုပ်ပါမစ်မှအဓိကချွင်းချက်နှစ်ခုကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ မတိုင်မီနယ်သာလန်၌နေထိုင်သောဗြိတိန်နိုင်ငံသားများ။ ဤနိုင်ငံသားများကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံတို့အကြားရုတ်သိမ်းမှုရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ဖြင့်အကျုံးဝင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသည်ဥရောပသမဂ္ဂအားလုံးဝထွက်ခွာသွားပြီးနောက်၌ပင်ဤဗြိတိန်နိုင်ငံသားများသည်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်မရှိပဲနယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားများသည်အမြဲတမ်းအီးယူနေထိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းများကဲ့သို့သောတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်များပိုင်ဆိုင်ထားမှသာလျှင်၎င်းသည်သက်ဆိုင်ပါသည်။ သင်ဤအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်သလား၊ သို့သော်နယ်သာလန်၌သင်နေထိုင်ရန်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းမရှိသေးပါသလော။ ထို့နောက်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိအလုပ်သမားစျေးကွက်သို့လွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်ရန်အာမခံထားရန်သတ်မှတ်ထားသော (သို့) အကန့်အသတ်မရှိနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုလျှောက်ထားခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။
လွတ်လပ်သောလုပ်ငန်းရှင်များ။ သင်သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ်လုပ်ကိုင်လိုပါကနေထိုင်မှုခွင့်ပြုချက်“ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်သူအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်” လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ကိုရလိုလျှင်သင်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ဆောင်မှုများသည်ဒတ်ခ်ျစီးပွားရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ သင်ရောင်းချမည့်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုသည်နယ်သာလန်အတွက်လည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိရမည်။ မည်သည့်အခြေအနေနှင့်သင်တွေ့ဆုံရမည်နှင့်လျှောက်လွှာအတွက်မည်သည့်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကိုတင်သွင်းရမည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။ ထိုအခါသင်သည်၏ရှေ့နေများကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် Law & More။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကသင့်အားလျှောက်လွှာကိုကူညီပေးရန် ၀ မ်းသာပါသည်။
At Law & More အခြေအနေတိုင်းကကွဲပြားတယ်ဆိုတာငါတို့နားလည်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်ချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏အမှု၌မည်သည့် (အခြား) နေထိုင်ခွင့်နှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ခြွင်းချက်များအကျုံးဝင်သည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။ ထို့နောက်ဆက်သွယ်ပါ Law & More. Law & Moreရှေ့နေများ၏ရှေ့နေများသည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဥပဒေကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ သို့မှသာသူတို့သည်သင်၏အခြေအနေကိုမှန်ကန်စွာအကဲဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးမည်သည့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်သည်သင့်အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီပြီးမည်သည့်အခြေအနေများကိုသင်လိုက်နာရမည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုလျှောက်ထားလိုပါသလားသို့မဟုတ်အလုပ်ပါမစ်လျှောက်ရန်စီစဉ်ပါသလား။ တောင်မှထို့နောက် Law & More အထူးကုဆရာ ၀ န်များကသင့်အားကူညီပေးလိုသည်။
နောက်တစ်ခု အဆင့် ၁၀ ဆင့်ကွာရှင်းပါ»